fekitari yedu iri specialized ari kugadzirwa rokutengesa ose kabhoni internet ndiro, carbon internet Kuumbwa zvigadzirwa, carbon faibha sepombi, CNC aruminiyamu chiwanikwa mukuru nemazvo zvikamu, carbon internet cnc kugadzira zvikamu, unmanned ndege kabhoni faibha, aruminiyamu chiwanikwa zvikamu, carbon faibha akaumbwa zvigadzirwa, kabhoni cnc kugadzira, zvose zvamarudzi Hardware uye zvemagetsi kuputira kugadzira nhengo.
The zvigadzirwa Anonyanyowanika kushandiswa zvakarurama zvikamu kushandisa michina zvokushandisa, unmanned zvikamu ndege, drone the mano uav mapuranga, motokari yakanaka, carbon faibha handicrafts, carbon faibha akaumbwa zvikamu, carbon faibha nenhumbi, zvokuimba shrapnel, midziyo mitambo, pamusoro kushongedzwa, zvemagetsi, michina uye zvemagetsi Hardware nezvimwe zvemagetsi industries.We paakakumbira maviri kuvamba patents uye 16 itsva rwokugadzira patents uye 4 pakuonekwa patents kusvikira 2018. tine akatotora akamuka 20 patents uye akatambira mvumo tsamba, nepo isu paakakumbira national yepamusorosoro Enterprises.
Umbwa muna April 2008, boka redu rakazvipira kuva yepamusoro kabhoni internet products.Two Kugadzirwa mitsetse akazarurwa kukura chirongwa kuchera, kuumbwa CNC kugadzira.
Kurimwa nharaunda yakanga yawedzera kusvika 800 mativi metres, chigadzirwa unhu akanga akavandudzika zvikuru, takatanga vakawanda kubudisa chinokosha kabhoni internet mashoko FPV.
Factory rakazotamisirwa kuna Gaobu Town, Dongguan, Guangdong mugore rino, kugadzirwa nharaunda yakasvika 2500 mativi metres, vanopfuura 10 zvakarurama chiridzwa michina uye zvakakwana mukoti mainjiniya yakawedzerwa kuvandudza muitiro. Saka kure, paiva 4 pamwero mukuru Kugadzirwa mitsetse kusanganisira kabhoni internet jira, carbon internet chubhu, CNC kubudiswa uye ounyanzvi.
chigadzirwa yedu anotenderwa ISO-9001-2008 Quality hurongwa advertising, chigadzirwa unhu kwave upgraded, rakanaka mwero yakasvika 99%.
Takapinda rechi13 Shanghai International Model Exhibition, uye waikudzwa pamwe musoro 2015 negore TOP 10 vanozivikanwa Enterprises.
Foreign Trade Department aiva pakagadzwa, uye takawana 4 bvumidzwa uye trademarks ose kabhoni internet product.Our chigadzirwa vari aivigirwa kunyika dzinopfuura 20 yose.
We akahwina wegore TOP 20 zvebhizimisi itsva zvinhu maindasitiri zvakanaka zvinhu pakusarudza zvokuita China.
We vaiitawo rechi19 chitandadzo Expo CHINA , Asia Pacific guru uye nesimba zvikuru muenzaniso nenyanzvi event.There vakanga anenge 60,000 vashanyi munyika-zuva matatu kuratidzwa, uye yedu kabhoni faibha mishonga akakwezva vatengi dzakawanda nyanzvi.
Tinogona kuita siyana kabhoni faibha zvigadzirwa dzakakwirira vade, yakakwirira standards.Personalized zvigadzirwa CNC chekawo maererano mutengi wacho drawings.We kupa Anoumba, kukuya, kuchera, CNC kubudiswa rimwe-chemabhazi basa.
We kuteerera "Unhu rokutanga, basa-zvinangwa, anonzwisisa mutengo," pamwe high quality, basa, basa kutsanya asimbise-refu kudyidzana pamwe ose customers.Continuing kuvandudza zvinhu zvedu uye mabasa, uende mberi zvedu vatengi uye kusvika kuhwina zvisamumirira pakati pedu uye vatengi.